माधवहरुले केपीलाई हटाएर एमाले अध्यक्ष पनि शेरबहादुरलाई बनाउने रे ! | परिसंवाद
गफाष्टक	 आइतबार, साउन १०, २०७८ मा प्रकाशित
भिरघरे ! हाम्रो प्रचण्ड काम्रेडले गर्दा माधव नेपाललाई खुदो पल्टियो । ओलीका नेता कार्यकर्ता सप्पै माधवतिर आउने भए । किसान श्रेष्ठले त ओलीतिर भएका २० जना सांसद नै नेपाल पक्षमा ल्याई दिन्छु, तुरुन्त संसदीय दलको नेता बन्नुहोस् भनेर आव्हान नै गरे । अब प्रेम आले, धनबहादुर बुढा र किसान श्रेष्ठ जस्ता धनाड्यहरु आफूतिर आएपछि अरुलाई आफूतिर ल्याउन सजिलो हुने भयो ।
हो नि बाटाघरे काका ! जहाँ सिद्धान्त, नीति, विचार, पद्धति छैन त्यहाँ लोभ फष्टाउँछ । धन सम्पत्ति, पद, प्रतिष्ठा, लोभ र कुण्ठा नै सिद्धान्त बन्न पुग्छ। अब माधवजीकै हकमा भन्नु पर्दा प्रचण्डले भने जस्तै एमाले कब्जा गरेर माओवादीलाई बुझाई दिए भने त ठिकै हो नत्र उनको राजनीति भन्न सकिदैन।
के कुरो गर्छस् भतिज भिरघरे ! माधव नेपाल डराउनै पर्दैन । हाम्रो माओवादीले काँध थाप्छ । ओली र एमाले ध्वास्त बनाउन सक्ने हाम्रो काम्रेडले माधवलाई बोकेर सिंहासनमा राख्न सक्छन् । संसद भवनमा बोलेको सुनिनस् ! ओलीलाई त थर्काइ दिए नि ! म आगो हुँ, संसार ध्वस्त गर्न सक्छु । होसियार भन्दिए ।
हो काका ! सुनेर, यी मान्छे नरसंहार र ध्वस्त गर्नै जन्मेका रान भन्ने लाग्यो । अनि काका त्यो १० बुँदे ओलीले पारित गरेछन् माधवहर्ले के गरे थाहा पायौ ।
त्यो समितिले ल्याको सहमति माधव काम्रेडले च्यातेर आफ्नै घरको छतमा छरपस्ट पारे भन्दै थिए । भीम रावल त त्यही कारण रिसाएका हुन क्यारे । होइन घिरघरे आफै दह्रो भएपछि सहमति किन गर्नु प¥यो ? तँ काँग्रेस भर शेर दाइको कुरो गर्नु पर्ने, किन अरुको कुरा गर्छस् । अब प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्र र जनताका लागि के गर्लान् !
यो भन्दा अगाडि चारपटक प्रधानमन्त्री भए । त्यसबेला के–के गरेका थिए, अब पनि त्यही गर्छन् । जसले जति जानेको छ त्यति गर्ने हो । पहिला प्राडो–पजेरो, सांसद किनबेच र अपहरण, सरुवा–बढुवा, वाइड बढी, नियुक्तितिर बढी ध्यान केन्द्रित गरेका थिए । अब त्यसो नगर्लान् । हुन त प्रचण्ड र देउवालाई पैसा भए केही चाहिदैन भनेर विदेशमा समेत भन्छन् ।
के वाइयात कुरो गर्छस् भिरघरे ! सकेको बेलामा गर्नु त पर्छ । हाम्रो काम्रेड दुई पटक प्रधानमन्त्री भए एक पैसा कमाएनन् । त्यत्रो ठूलो मान्छे अर्काको घरमा यसो महिनाको पाँच सात लाख भाडा तिरेर बसेका छन् । छोरो वितेर गए । दुई दुई वटी बुहारी छन् । भाइ, भतिजा छोरी, नातिनातिनाहरु छन् । सर्वहारा वर्गको हक र अधिकारको लागि लडेका व्यक्ति देखाउनकै लागि पनि सान–सौकत, रवाफमा ध्यान दिनै प¥यो । प्रचण्डले जे सोच्यो त्यो पुगेको छ ।
हो नि ! घरवेटी ठेक्केदार पनि उनकै छन् । क्रान्ति गर्ने भनेर १० वर्ष तिमारु जस्तलाई बन्दूक बोकार रुकुम रोल्पा गराए, आफू दिल्लीमा बसेर फरमान जारी गरे । पण्डित, पूजारी, शिक्षक, क्रियापुत्री सबै ….. !
फेरि के भन्छ यो भिरघरे ! त्यही क्रान्तिका कारणले अहिले धेरैले सुख भोग गरी राखेका छन् । कमाई गरेका छन्, खाका छन् । त्यसले थुप्रो नगरपालिका, प्रदेशमा सबैतिर प्रदेश संसद । गाविसदेखि प्रतिनिधि सभासम्म सबैतिर खान पाका छन् ।
खाए काका ! खाए ! नराम्रोसंग खाए । जनप्रतिनिधि सपलाई जागिर भयो । जनताले तिरेको करमा ब्रम्हलुट भयो । माओवादीले लुटेर बाँकी रहेको अहिले लुट्दैछन् । जे भन काका ! कमसेकम ओलीसंग सपना थियो, योजना थियो । योजनाहरु चाँडो पुरा गर्नुपर्छ भन्ने हुटहुटी थियो । अब हाम्रो देउवा, तिम्रो प्रचण्ड र माधवहर्ले त्यो पनि गर्दैनन् । हामीलाई राम्रै छ, गाउँमा ठेक्कापट्टा पाइन्छ ।
लु त्यसो चै नभन । जनतको आधारभूत समस्या अब समाधान हुन्छ । देखिनस् यो सरकार आउनासाथ अम्रिका, जापान, चाइना, भारत लगायतका देशले कोरोनाको खोप त ह्वाराङराङ पठाइ दिए । अब एमसिसी पास गरेपछि अम्रिकाले जे भन्यो त्यो दिन्छ । विकास नाथे त कति कति !
गफ नगर न काका ! कोरोना खोपको बन्दोवस्त अघिल्लै सरकाले गरेको हो । ढाँटेको कुरो टिक्दैन क्या काका ! आफ्नै सरकारको विरोध गर्छ भनौला तर हाम्रो सरकारले ओली सरकारले गरे जति काम पनि गर्न सक्तैन । देउवा, प्रचण्ड माधवको दिमागमा पानी जहाज, रेल, सुरुङमार्ग, नेपालमा पनि सम्भव छ भन्ने छँदै छैन । पहिलो कार्यकालमै ओलीले पानीजहाज र रेलको कुरा गर्दा बौलायो भनेर तमास गरे । अहिले धमाधम काम हुँदैछ ।
त्यस्तो नाथे योजना, सपना र कामले हुने भए देश कहाँ पुग्ने थियो ? सपना र भाषणले हुन्छ ? काम हुनुपर्छ काम !
सुनिस होलानी भिरघरे यी बुढाको कुरो । रेल कुद्न थाली सक्यो । पानी जहाज चलाउने भनेर चारवटा नदीमा नाप जाँच हुँदैछ । विज्ञहरुले अध्ययन गरेर पानीजहाज चल्न सक्छ भनी सके । धमाधम विकासका काम भै राका छन् । अब माधव नेपालहरु भने ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर देउवालाई एमालेको अध्यक्ष बनाउन लाग्छन् । यदि देउवा मानेनन् भने प्रचण्डलाई अध्यक्ष बनाउने होला नी । प्रचण्डले जे भन्यो त्यही मानी राखेका छन् । यस्तै पाराले यो मुलुकको प्रगति र उन्नती हुन्छ भन्ने नसोचे हुन्छ । अब हेरौंला यो सरकाले कति गर्छ !
झुम्री पनि विकासको ब्याख्या गर्ने भै । अर्थतन्त्र डामाडोल छ । उपचार नपाएर जनता मर्दै छन् । कलकारखाना निर्माण भएका छैनन् । युवा जति कामको खोजीमा विदेश गए ।
काकीले ठिकै भनिन् काका ! अनि अर्थतन्त्रको कुरा गर्ने हो भने चाइना बाहेक विश्वका सबै मुलुकको डामाडोल छ । कलकारखाना हाम्रो काँग्रेसले बेचेको हो । अलि अलि बाँकी रहेको तिमार्को माओवादीले ध्वस्त बनायो । विकासको माम्लामा यो मुलुकलाई ५० वर्ष पछि धकेल्ने काम माओवादीले ग¥यो भने अरु थपथाप हाम्रो काँग्रेले ग¥यो ।
कस्तो निहुँ खोजा कुरो गर्छ यो घिरमरे ! क्रान्ति गर्दा छिटपुट घटना भको हो । अरु केही होइन ।
लौ काका ! जे सुकै भन । म त भको र देखेको बोल्छु । म अब उभिण्डेतिर ओरालो लागें काका !